IDM fake serial number ​ပြ​ဿ​နာ ​ဖြေ​ရှင်း​နည်း ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Example November 25, 2013 at 8:02 PM
chanmyae hlaing November 25, 2013 at 8:03 PM
​ကျွန်​တော်​ကွန်​ပြု​တာ​က window XP ​ပါ​အစ်​ကို..​အစ်​ကို​ပြော​သ​လို​လုပ်​ပါ​တယ်..​ဒါ​ပေ​မယ့် ​မ​ပျောက်​ဘူး​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ်..​အစ်​ကို​ပြော​တဲ့​နည်း​အ​တိုင်း ​လုပ်​ပါ​တယ်..​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဘောက်စ်​လေး​က​တက်​နေ​တုန်း​ပါ​ပဲ..​ဘယ်​လို​ဆက်​လုပ်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​အစ်​ကို​အ​ကြံ​ပေး​ပါ​ဦး..​ကျွန်​တော်​က ​ဘန်​ကောက်​က​ပါ..
Emc Prince November 26, 2013 at 3:48 PM
​အ​ကို​ရေ Share ​လုပ်​မယ်​နော် ​အ​ခု​ပို့စ်​အ​တွက်​ကျေး​ဇူး​ပါ​ခင်​ဗျာ
Ozil Bourn November 27, 2013 at 8:17 AM
​အ​ကို ​ဒေါင်း​လို့​ရ​တဲ့ host ​ကို ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​တော့​လေ administrator permission ​ဆို​ပြီး​တောင်း​နေ​တယ် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ​မ​သိ​ဘူး​ခင်​ဗျာ​အဲ့​လို​တောင်း​တဲ့​ဟာ​ကို continue ​နှိပ်​လိုက်​လည်း​မ​ရ​ဘူး​ခင်​ဗျာ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ
myint LAy November 27, 2013 at 9:14 PM
ZeroLay I.T December 13, 2013 at 9:42 PM
myint LAy November 27, 2013 at 10:22 PM
​ဘာ download link ​မှ​မ​ရှိ​ဘူး
Fri Ten November 29, 2013 at 7:10 PM
ူlink ​လည်း​မ​ရှိ​ဘူး ​အ​ကို ​လုပ်​ပါ​အုန်း
ZeroLay I.T December 13, 2013 at 9:43 PM
win aung December 3, 2013 at 5:00 AM
win aung December 3, 2013 at 6:35 AM
thuzar December 3, 2013 at 1:34 PM
Sai Mwun Naw December 7, 2013 at 12:04 AM
Download link ​က IDM ​အ​တွက်​သက်​သက် ​တင်​ထား​တဲ့ post ​မှာ​ရှိ​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျ
min kaung December 8, 2013 at 7:43 AM
download link ​ကို..​ဒီ​မှာ..​လို့ ​ရေး​ထား​တဲ့​စာ​သား​ကို​နှိပ်​၍​ဒေါင်း​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်..​သူ​ငယ်​ချင်း​တို့ 
​လင့်​ရှာ​လို့ ​မ​တွေ့ ​ဘူး​ဆို​လို့ ​ညွှန်း​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ...​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​ပါ​စေ
min kaung December 8, 2013 at 7:45 AM
​ဒီ​မှာ​လို့ ​ရေး​ထား​တဲ့​စာ​သား​ကို​တွေ့ ​အောင်​ရှာ​ပါ..
min kaung December 8, 2013 at 7:46 AM
min kaung December 8, 2013 at 7:47 AM
ZeroLay I.T December 13, 2013 at 9:40 PM
​သူ​ငယ်​ချင်း​များ Download ​လင့်​အ​တွက်​တောင်း​ပန်​ပါ​တယ်​အ​ခု​ပြန်​ပြီး​တော့ upload ​လုပ်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်
ZeroLay I.T December 13, 2013 at 9:45 PM
aungswe December 21, 2013 at 12:17 AM
​မ​ရ​ပါ။ error box ​က​ပေါ်​နေ​တုန်း​ပဲ။
. . January 12, 2014 at 12:38 PM
​အ​ဆင့် ၁၆ ​မှာ ​ရေး ​ထား​တဲ့ Download ​လုပ်​လို့ ​ရ​လာ​တဲ့ hots ​ဖိုင်​ကို ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​ပေး​လိုက်​ပါ။ြ
exe file and3patch file in latest version of idm in zip file
Kyaw Su Thway March 16, 2014 at 9:04 PM
​ပုံ6 ​မ​ရှိ​ဘူး​ခင်​ဗျ.. ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ?
Aye Mon Khaing May 19, 2016 at 3:24 PM
where can i download hosts file ,sir?
Aye Mon Khaing May 19, 2016 at 3:29 PM
where can i download hots file , sir ?